श्रीमान विदेशबाट आए भनेर विमानस्थलमा जाँदा अर्कै महिला स्वागत ग र्न पु गेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
श्रीमान विदेशबाट आए भनेर विमानस्थलमा जाँदा अर्कै महिला स्वागत ग र्न पु गेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८ समय: १५:५३:५३
By Nepalnews -February 24, 202107361
काठमाडौ । गोर्खाकी एक महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रीमानलाई लिन विमान स्थल गइन् । उनको २०६४ सालमा विवाह भएको थियो । उनी १५ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो । उनको श्रीमानको विवाहित भइसकेको रहेछ, उनका एक छोरा पनि थिए । तर उनले जता गयो उतै पछि लागेर फकाए । जिवन गिरी नामका उनका श्रीमानले पछि लागेर जसरी पनि तिमीसंगै विवाह गर्छु भनेर छोड्दै छोडेनन् ।
Last Updated on: August 27th, 2021 at 3:54 pm